George's Apartments-Apartment 2 - I-Airbnb
George's Apartments-Apartment 2
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGeorge
IApartment 2, yi-1 kwezi-2 zeeApartments zikaGeorge. Omabini amacala anokuqeshwa kunye ukuze ahlalise ukuya kwiindwendwe ezili-10. Amafulethi abanzi kwaye alungele izibini, abahlobo kunye/okanye iintsapho.
Amagumbi akuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka eWillyama Beach, kunye nakwinqanaba lomnyango we-Innes National Park.
Isifudumezi esiphathwayo sombane ebusika.
Le ndlu yeyona ndawo ifanelekileyo yokubuyela ekhaya emva kosuku olude elunxwemeni. Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo ukwenza ukuhlala kwakho kukhululekile.
Iqulethe ikhitshi evulekileyo yesicwangciso esinezixhobo zangoku kunye nazo zonke izixhobo zokupheka ezibalulekileyo ukwenza isidlo esimangalisayo sosapho.
Indlu ibandakanya igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo yokuzimela.
Igumbi lokuphumla lineendawo zokuphumla ezitofotofo kunye neTV enamajelo engingqi.
Kukho amagumbi amabini okulala; Eyoku-1 enebhedi yokumkanikazi evuleleka kwintendelezo yangaphakathi, kunye neyesibini enebhedi yokumkanikazi kunye nendawo yokuphumla.
Le ndlu inentendelezo yangaphakathi ene-BBQ yefashoni yakudala ye-Aussie, okanye ukupheka intlanzi osandula ukuyibamba. Kukho itafile yangaphandle ukonwabela isidlo sakho.
Ibhedi kunye neetawuli zibandakanyiwe, ukwenza ukuhlala kwakho kube lula ngakumbi.
4.89 · Izimvo eziyi-242
IMarion Bay yidolophu entle eselunxwemeni lolwandle, kuSingasiqithi weYork.
IMarion Bay ikumnyango we-Innes National Park. IPaki yindawo entle yendalo egcwele ezona lwandle zibalaseleyo zaseOstreliya, kwaye ikulungele ukuqubha, ukusefa, ukuloba, ukuhamba ematyholweni kunye nokujonga izilwanyana zasendle - sinokuqiniseka ukuba uya kuyibona ikhangaru kutyelelo lwakho. Jonga kwiwebhusayithi yePaki ngolwazi oluthe vetshe.
IMarion Bay ineelwandle ezimbini eziphambili ezikuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka kwigumbi lokuhlala; UWillyama uyazi ngokuntlitheka kwenqanawa yeSS Willyama, kunye nePenguin Point, ulwandle olukhulu olukhokelela kwijethi yaseMarion Bay, elungele ukuskwidi ebusuku. Iilwandle zasekuhlaleni zilungele iintsapho. IPenguin Point lunxweme olungekho nzulu kwaye ilungele abantwana abancinci.
Idolophu inecafe enkulu, ebizwa ngeBeach Break; ukunika isidlo sakusasa nesasemini, ikofu, iikeyiki kunye neepayi ezenziwe ekhaya. I-Marion Bay Tavern kuphela kwe-pub edolophini, kwaye inika isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kubandakanya iipizza zomlilo wamaplanga, kwaye inevenkile yeebhotile. IMarion Bay General Store inepetroli, ithatha ukutya nezixhobo ezifana nobisi nesonka.
Ukufumana ukhetho lokutya kweso sidlo sangokuhlwa sikhethekileyo qhagamshelana noCaroline kwi-MBC Foods, okanye undwendwele ivenkile yakhe engaphambili.
UGeorge uhlala emva kwamagumbi, kwaye uya kukuvuyela ukuncedisa kulo naluphi na ulwazi lwasekuhlaleni.
Intombi yakhe uTiffany iququzelela ukubhukisha nge-imeyile, ngelixa uGeorge ephethe zonke iifowuni.